Ficus | February 2020
Taageerada hooska ee guriga iyo xafiiska
Editor Ee Doorashada February 24,2020
Ugu Weyn Ee Ficus
Barashada sababaha koritaanka xun ee ficus Benjamin
Benjamin Ficus waa geed caleen ah (ama geed) ee Ficus genus iyo qoyska Mulberry. Ficus waxaa lagu kala soocaa iyada oo aan la qabin oo waxaa lagu kori karaa guriga sida guri guri. Waxay si fudud u soo saari kartaa oo si quruxsan u qurxineysaa gudaha gudaha ama xafiiska. Laakiin, inkastoo aan qabsoomeynin, ficus wuxuu u baahan yahay daryeel habboon.
Cudurada ugu weyn ee ficus dhirta caaga ah, waxa la sameeyo haddii ficus uu jiran yahay
Marka la eego xaaladaha dabiiciga ah, dhirta caleemaha dhirta ah waa warshad dilaac ah oo leh dhuudh caleen ah oo koraysa ilaa 50 mitir. Waxay ku koraan wadamada kulul meelaha bannaan oo ku yaala koonfurta Indonesia, kulaala Asia, iyo bariga Hindiya. Xiiso leh Qarnigii 19aad, caag dabiici ah ayaa laga soo saaray juuska of this ficus.
Noocyada Ficus Benjamin
Benjamin Ficus, sharaxaad ka mid ah noocyada Ficus Benjamin waa noocyo of u dhalatay oo ka tirsan caleenta of qoyska mulberry of ficuses. Benjamin Ficus dabiicigu wuxuu gaari karaa 25 m dhererka, iyo guriga 2-3 m. Sidaa darteed, dhirta waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu beero cagaarsho. Marka kor loo qaado ficuskan waxaa suurtagal ah in la siiyo qaabab kala duwan oo asaas ah.
Noocyada caag-ficus iyo sharraxaadkooda
Ficus - dhirta kulaylka-kulaalayaasha kulaylaha ee Koonfurta iyo Koonfur Asiya. Dadka yurubiyaanka ah waxay la kulmeen warshad intii lagu jiray ololihii Hindiya ee Macedon 327 CH. The founder of the botanist, Theophrastus, oo ka qaybgalay ololaha, ayaa ku tilmaamay geed weyn oo daboolay 300 mitir iyada oo hooskii, waxay ahayd a miisaaniyadda Bengal, ama geed banyan.
Dad badan ayaa jecel inay qolka ku qurxiyaan ubaxyo. Laakiin qurxinta qolka mugdiga ah mar walba ma fududa: waxaad u baahan tahay inaad hesho dhirro noocaas ah si aad u hesho xaaladaha aad adigu ku haboon tahay. Xaaladdan oo kale, kaliya ugu badneyn in ay ubaxyada soo ururiyaan ee maqaalkan ayaa sameyn doona. Adiantum Adiantum waxaa iska leh Cajiibka Adiant waana fern dilaacsan.
10-ka dhirta indoor-ka leh leh sawirro iyo sharraxaad
Ubaxyada qandhada ah ma aha oo kaliya in lagu daro naqshadeynta dhismahaaga, laakiin sidoo kale raadin faa'iido leh. Dhirta Kuwani waxay abuuraan jawi xiiso leh oo gurigaaga ah, ku dar midabka midabada gudaha kuna faraxsan isha waqti kasta oo sanadka ah. Qiime gaar ah waa ubaxyada ka faa'iideysan kara caafimaadka dadka.
Sidee si habboon u daryeeli kartaa ficus Abidjan guriga
Ficus Abidjan (Ficus Abidjan) - mid ka mid ah dhirta ugu caansan ee gudaha, kaas oo muddo dheer ku guuleystay jacaylka bannaanka. Waxay u muuqataa mid aad u wanaagsan guriga iyo xafiiskaba, qurxinta qolka iyo siinaya wax yar oo qalaad. Warshadkan ayaa ku farxay milkiilayaasha sanadka oo dhan, waxaad u baahan tahay inaad ogaato sida si habboon u daryeesho isaga.
Manjada habboon ee ficus guriga
Benjamin Ficus waxaa laga heli karaa meel kasta oo guri ah halkaasoo ay jiraan dhirro gudaha ah. Dad badan oo jecel cagaarka guriga ayaa soo jiidanaya quruxdiisa iyo sahlanaanta daryeelka. Laakiin ma ahan kuwa beeralayda oo dhan in ay ogaadaan in ay suurtagal tahay in ay mawduucaani u noqoto gooyo iyo qaabaynta. Ficus waa dhir dheer oo nool, oo ah dhererka, kaas oo leh daryeel habboon, kama badna 2 mitir.
Burdock wuxuu baxaa: faa'idooyinka iyo waxyeelada marka la ururinayo iyo sida loo isticmaalo
Danko Dhiig-jecel Danko: sharaxaad kala duwan, astaamaha, sawirada
Waa maxay sababta geed husob waxtar leh?
Noocyada diyaarinta miraha basbaas iyo eggplant si ay u beeraan geedo: goorta iyo sida loo sameeyo si sax ah
Jaangooyo-hore ee dhexdhexaadka ah ee dabocase "Rudolph F1": qaababka kala duwan ee kala duwan, cayayaanka iyo cudurrada
Maxaad u jeceshahay canabkani? Sababtoo ah wuxuu yahay mid qurux badan, sida haddii laga soo qaado rinjiyeynta Farshaxanimada. Ma aha beerta kaliya ma noqon doonto mid niyad jabsan haddii uu kala dooranayo noocyada kala duwan ee magaca Talyaaniga - kooxo waaweyn oo xajmi leh ayaa qurxin doona facka hareeraha, sidoo kale waxay ku haboon tahay khamriga guriga. In foomka cusub, ma kala duwan wax badan - dhafan fudud, dhadhan canab. Read More
Ku-duufis "Kuproksat": habka codsiyada iyo heerka isticmaalka
Raashin dhadhan fiican leh ee karinta iyo ilaalinta dabocase qoraxda leh kaabajka, oo ay ku jiraan daikon ee Kuuriya
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Ficus 2020